Sangano revashandi reZCTU rinoti harisi kufara nenhaurirano social contract kana kuti chibvumirano chemushandira pamwe pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi, richiti hurumende yaVaRobert Mugabe haina kuvimbika.
Vanoti chikuru chiri kudzosera kumashure nhaurirano dzekuedza kumutsiridza hupfumi hwenyika idzi kusazvipira kwezvevematongerwo enyika.
Zvinonzi hurumende yaida kuti chibvumirano ichi chinge chanyoreranwa gore rapera muna Zvita, asi vamiriri vevashandi vakati vakanga vasati vapiwa mvumo yekusaina nevavanomirira.
Svondo rapera mapoka matatu aya akasangana pasi peTripatite Negotiating Forum, apo pakazowiriranwa kuti patange paongororwa kuti zvimwe zvibvumirano zvakamboitwa kare zvakabereka michero here kana kuti kwete.
VaMoyo vanoti nekuda kwezvose izvi, sangano ravo harisi kuzosaina gwaro iri pasati pagadziriswa zvematongerwo enyika.